Akụrụngwa Presto bụ onye na-eweta ụzọ dị iche iche nke ọtụtụ ụdị igwe eji arụ ọrụ: ndị na-anụ ọkụ ọkụ dị elu, ndị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, ihe nyocha nyocha akpaaka maka ngwaọrụ ahụike na akwa ndị a na-abụghị ndị a kpara akpa, usoro eji emebe ahaziri iche ma na-enye ọtụtụ usoro maka akpaaka ọrụ .
Anyị bụ ndị a mụ na dynamically eto ụlọ ọrụ na n'ichepụta osisi na isi itieutom emi odude ke Shanghai, China. Anyị na-enyocha ma na-enyochagharị onyinye anyị mgbe niile iji gbanwee maka usoro ahịa na-agbanwe agbanwe na mkpa ndị ahịa.
Pụrụ iche na igwe eji ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na ọgwụ, ọgwụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ọnụahịa akụ na ụba. Anyị engineering nka, na-eru azụ karịrị afọ 16, multilingual ọkachamara mkpara na ike mba ahia ndabere, pụtara ulo oru track ndekọ dị ka nke ọma dị ka onye siri ike mmekọrịta na anyị suppliers na ndị ahịa bụ anyị isi akụ.
Anyị na-ekekwa usoro aghụghọ nke ndị na-ekpo ọkụ ọkụ dịka ihe ndị ụlọ ọrụ na-achọ.
Anyị na-ewu gburugburu 200 igwe kwa afọ! Kemgbe ọtụtụ afọ, Presto ebutela ụzọ inye ọrụ arụmọrụ State-Of-The-Art. Igwe na akụrụngwa Presto wuru bụ CE / UL zuru oke ma mee dị ka ụkpụrụ ISO9001 si dị.
OEMs, ndị na-emepụta nkwekọrịta na ndị nwere akara akpọrọ Presto Automation dị ka ndị ọrụ ntụkwasị obi na teknụzụ ha tụkwasịrị obi kemgbe 2004.
Approachzọ anyị si arụpụta ọrụ na usoro akpaghị aka etinyela ụkpụrụ maka ndị ahịa na-arụ ọrụ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ na azụmaahịa ọ bụla. Chee echiche banyere Presto Automation dị ka atụmatụ ị ga - eji merie asọmpi - mpaghara, mba na ụwa. Anyị nwere ọkachamara na ịmepụta ihe okike, ihe ngwọta dị iche iche maka akụkụ nrụpụta na mkpa ọgbakọ, jiri nkenke arụ ọrụ sitere na Presto Automation dịka akụkụ dị mkpa nke sistemu anyị.